Hey’adda Culimada Soomaaliyeed oo ka soo horjeesatay Bandhig faneedka magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaHey’adda Culimada Soomaaliyeed oo ka soo horjeesatay Bandhig faneedka magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Apr 18, 2018:- Hey’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa digniin ka soo saaray bandhig faneedyo lagu wado in 20-ka bishan lagu qabto magaalada Muqdisho, iyaga oo ugu baaqay dowladda in la joojiyo.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hey’adda Culimada Soomaaliyeed oo ka hadlayay shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay dhalinyarada in aysan lacagtooda ku bixin sida uu hadalka u dhigay Carrada Alle, islamarkaana ka qeybgalin Bandhig Fannneedka la qaban-qaabinayo.
Waxaa uu ku eedeeyay xubno ka tirsan dowladdaa in ay fannnaaniintan ku soo dhaweeyeen Muqdisho, islamarkaana qeyb ka yihiin qaban-qaabada showgga ama Bandhig Fanneedka.
“Waxaan u soo jeedineynaa shacabka, gaar ahaan dhalinyarada in aanay ka qeyb gelin bandhig fanneedkaas oo aanay lacagtooda ku bixin Carrada Alle iyo cadaabta” ayuu yiri guddoomiyaha hey’adda Culimada.
Fannaaniinta lagu wado in ay ka qeybgallaan Bandhiggan ayaa waxaa ka mid ah Kiin Jaamac oo maalmihii ugu danbeeyay siweyn uga soo dhax muuqatay baraha bulshada kaddib Show ay ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.